Q2VKPT: mutambo wakanangana neQuake 2 nerutsigiro rweVulkan API | Linux Vakapindwa muropa
Darkcrizt | | Updated on 30/01/2019 17:43 | Linux Mitambo
Nguva iyo vhidhiyo yemitambo indasitiri iri kutanga kuongorora huwandu hwenzvimbo dzaunopa Iko kuvandudzwa kwehunyanzvi kwekugadziriswa kwemimvuri uye kuratidzwa, ivo vakazvimiririra vanogadzira vakaburitsa Q2VKPT (Quake II PATHTRACED).
Q2VKPT mugumisiro wechirongwa chekuratidza zvinogona kuwanikwa mumitambo inotevera neiyo Push yekumisikidza kwekutevera ray.
Q2VKPT yakavakirwa pamutambo unozivikanwa Quake 2 kubva 1997, Iyi Q2VKPT FPS inoenderana zvizere neray yekutsvaga tekinoroji mise neazvino NVIDIA GPU gadziriso mhinduro kubva kumugadziri.
Iyo purojekiti parizvino inosanganisira gumi nemaviri emitsetse yekodhi uye inotsiva zvachose iyo yekutanga Quake II kodhi yemifananidzo. Pakutanga yaive prototype yakagadzirirwa pasi peOpenGL nerubatsiro rwevashandi vakati wandei.
Iri zita hombe inoshandisa nzira dzakasiyana siyana dzekugadzirisa kumitambo yedzakambo shandiswa nzira dzekuverenga inodhura chete muindasitiri yemufirimu.
1 Nezve Q2VKPT
1.1 Nezve kukura kwayo
2 Ungawana sei Q2VKPT?
Iyi FPS inoshanda inosanganisira nzira yekutevera, iyo algorithm iyo inotora mukana weiyo ray yekutsvagisa, kuverenga, uye inoenderana neyepasi firita yekudzora ruzha rwemberi, pamwe nekurwisa kwechinguva, izvo zvine hungwaru zvinoshandisa zvakare mhedzisiro yekuverenga kwekare kuratidza mufananidzo wakachena.
Sechiyeuchidzo, Yakanga iri panguva yeMutambo weVagadziri Musangano 2018 wakaitwa munaKurume apfuura kuti NVIDIA yakaratidza tekinoroji yayo yeRTX, ray yekutsvagisa tekinoroji iyo inogonesa vanogadzira mutambo uye vanogadzira zvemukati kuendesa Cinema-mhando kupa mune chaiyo nguva kuunza chaiwo nyika kuupenyu.
Iyo inobvumidza kunyatso kutonga pamusoro pekupenya, kwakasimudzira, uye mimvuri yekupa matambiro anoitirwa kuve akajeka uye padhuze nenyika chaiye.
Kutenda ray ray, panzvimbo yekudhirowa fungidziro yezvinhu zve3D pane pixel ndege, isu tinoteedzera chokwadi nekutevera nzira iyo photon ingadai yakatora iyo ingadai yakasvikira ziso remucherechedzi kuti ione iro chairo ruvara.
Izvi zvinopa zvimwe zvakawanda nezve kudzikiswa kwezviitiko mumutambo.
Mureza wechizvarwa chitsva cheNVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ine 4352 CUDA cores, yayo 11 GB yeGDDR6 VRAM, bandwidth ye616 Gb / s, yayo 272 TMU, 88 ROPs uye TDP ye250 watts.
Iyi GPU iri, zvinoenderana nemugadziri wayo, inokwana kana katanhatu inoshanda zvakanyanya maererano nematanho akatsaurwa pakutevera ray uye anokwana kakapetwa kagumi mukuverenga zvine chekuita nehungwaru hwekunyepera kupfuura maseketi eGTX echizvarwa chakapfuura.
Zvinoenderana nechikwata chiri kutarisira kusimudzira Q2VKPT, lMitambo yanhasi senge Hondo yeV, kunyange ichinyanya kuomarara maererano neruzivo, ingo tarisa mikana inopihwa nekutarisisa ray uye uchiri kuvimba neyakajairwa giraidhi-yakavakirwa rasterization.
Iyo projekiti inofanirwa kuratidza kuti kune zvimwe zvakawanda zvekutsvaga.
Nezve kukura kwayo
Q2VKPT inobvisa zvimwe 2D zvinhu mune raster mifananidzo uye inoshandisa kwepasi rose kujekesa nzira kutsvaga kweiyo static uye ine simba mwenje masosi, kusanganisira ray akateedzera mimvuri uye yakajeka yakajeka; angangoita matanda mana anopfurwa nepikiseli.
Kuti ushandise iyo nyowani yekutsvagisa maficha akaiswa mune iyi FPS, iwe uchazoda kadhi yemifananidzo yemazuva ano iyo natively tsigira VK_NV_ray_tracing yekuwedzera seNVIDIA RTX GPUs kubva kuTuring kuvaka.
Q2VKPT inogona, semuenzaniso, kutambidzwa panenge makumi matanhatu eFPS pa60x2560 tsananguro ine NVIDIA RTX 1440Ti kadhi yemifananidzo.
VKPT uye Q2VKPT zvakagadzirwa naChristoph Schied sechikamu cheiyo chirongwa chevaraidzo yekusimbisa kutsvagisa kwemakomputa mumutambo wevhidhiyo uchangoburwa.
Ungawana sei Q2VKPT?
Kune avo vari kufarira kuyedza mutambo uyu, Iwe unogona kuenda kune webhusaiti yepamutemo yeprojekti kwaunowana zvinongedzo zvekutora iyo sosi kodhi yemutambo kuti ugone kuisanganisa muLinux, nepo paWindows patova nemubatanidzwa wakagadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Q2VKPT: mutambo unobva paQuake 2 nerutsigiro rweVulkan API
Jonathan C. akadaro
MASHOKO ANOGONESESA. Tarisa usati waisa.
Pindura kuna Jonathan C.